Vaovao - Gel fanadiovan-tanana manohitra bakteria
Ny gel famonoana otrikaretina tanana manohitra ny bakteria dia gel famonoana otrikaretina azo alefa, izay vokatra famonoana otrikaretina vaovao novolavolain'ny orinasanay tamin'ny taona 2020. Mety hamono bakteria sy viriosy an-tanana amin'ny fomba mahomby izy io. Izy io dia gel misy bakteria miaro ny tontolo iainana, izay tsy mahasosotra ny hoditry ny olombelona ary tena sariaka amin'ny tontolo iainana. Amin'izao fotoana izao dia efa nanondrana azy any amin'ny firenena maro toa an'i Japon sy Hong Kong. Manana andiana famokarana ranon-javatra famokarana mandeha ho azy tanteraka isika. Ny vokatray dia novokarina tao amin'ny atrikasa fanadiovana, izay sariaka amin'ny tontolo iainana sy madio ary afaka manatsara ny fahombiazan'ny famokarana. Afaka mamaly tanteraka ny filan'ny mpanjifa izany. Rehefa vita ny famokarana, dia handamina inspecteur kalitao koa izahay hanao fizahana fanindroany hisorohana ny olana amin'ny kalitao, ary azonao atao ny mividy sy mampiasa azy io amin'ny fahatokisan-tena. Ny fonosana sy ny akora azo avy amin'ny vokatray dia mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena, ary manana ny mari-pahaizana momba ny fanafarana sy fanondranana ary ny tatitra momba ny fanaraha-maso.
Ho fanampin'izany, manana karazana mpitsabo bakteria isan-karazany koa izahay:Savony tànana bakteriaIn Famonoana rongony mangatsiaka amin'ny barila 、Ranomandry fanadiovana tànana、 Manadio tanana amin'ny alikaola ho safidinao.
Fomba fampiasana azy: esory gel izay mety aminy, apetaho eo an-tananao izy, ary ataovy mandritra ny segondra vitsivitsy mandra-pahatongan'ny fahadiovan'ny tany.